သင်၌လိင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ရှိပါကဆက်ဆံရေးသည်အလျင်အမြန်ရှုပ်ထွေးပြီးအကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ယူရန်နည်းလမ်း ၅ ခုရှိသည်။
မင်းမှာတစ်ခုတည်းသောဆန္ဒရှိတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းဟာခက်ခဲတဲ့ပြိုကွဲမှုကနေထွက်လာတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်အခြေမခံချင်လို့လားဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းကလိင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အကယ်၍ သင်ဒီလိုဆက်ဆံမှုမျိုးနဲ့အရာရာတိုင်းဟာလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ရင်သင်ချက်ချင်းစိတ်ပျက်သွားတယ်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာလက်မှလွတ်မြောက်နိုင်သည်! သင်၏ခံစားချက်သည်လမ်းပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင်၏ဆက်ဆံရေးတွင်အစွမ်းတန်ခိုးရှိသမျှကိုစတင်ခံစားရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အခြေအနေကသင့်ကိုအရမ်းဝမ်းနည်းစေလျှင်အရာအားလုံးကိုရပ်တန့်ပစ်နိုင်လျှင်၊ သင်၏လိင်သူငယ်ချင်းနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အချက် ၅ ချက်ပါရှိသည်။
အကယ်၍ သင့်ရှေ့မှောက်ရှိလူတစ် ဦး သည်နောက်ဆုံးအကြိမ်တွင်သင်၏အစီအစဉ်များကိုစတင်ဖျက်သိမ်းလျှင်၊ နာရီနောက်ကျနေလျှင်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်သင်၌ပြproblemနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာပြီးသင်၏အာရုံကြောများကိုဖွင့်လျှင်၊ လေးစားမှုကိုတောင်းဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာမင်းကိုဘာမှကတိပေးမထားခဲ့ရင်တောင်မင်းဟာမင်းနဲ့မပေါင်းသင်းရင်တောင်မင်းကိုချည်နှောင်ထားတာကလေးစားမှုပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်အတူတကွကောင်းမွန်သောအချိန်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နယ်နိမိတ်အပြုအမူကိုအပြစ်မတင်ပါ။ သူ / သူမသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောရှုထောင့်မှသင့်အားဘာမျှအကြွေးမတင်ခဲ့ပါကသူသည်သင့်အားအနိမ့်ဆုံးလေးစားမှုကိုပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ သငျသညျသတိထားပါရန်ရှိသည်!
သင်နှင့်တရားဝင်ဆက်ဆံနေသူတစ် ဦး နှင့်လိင်မှုကိစ္စမိတ်ဆွေတစ် ဦး အကြားခြားနားချက်မှာစိတ်ခံစားမှုသည်အချက်တစ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ထင်တာကိုအလှဆင်ဖို့မလိုအပ်သလိုပconflictsိပက္ခများကိုလည်းရှောင်ရှားရန်သူမကိုဒေါသမထွက်မိဖို့လိုပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ရိုးသားမှုသည်သင်၏ဆက်ဆံရေး၏ရည်မှန်းချက်သည်အပြည့်အဝအားသာချက်ရယူရန်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေခြင်းမရှိသောကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးလာရမည်။ တစ်စုံတစ်ခုကသင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလျှင်အရာရာကိုသင်ကိုယ်တိုင်မထားပါနှင့်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သို့မဟုတ်မလေးစား / မလေးစားမဖြစ်ပေမယ့်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ပါ။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုတုံ့ပြန်ရန်၊ လိင်ဆက်ဆံရန်သို့မဟုတ်မပြုလုပ်ရန်၊ အကွာအဝေးကဒ်ပြားကစားခြင်းထက်များစွာကောင်းသည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ အကယ်၍ သူသည်သင်၏အစည်းအဝေးများကိုဂရုစိုက်ပါကသူသည်သင့်အားအရံနေရာတွင်သင်ပိုမိုတွေ့မြင်ရန်သူအံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ဖော်ရွေပါကသင်လုပ်ရန်မှာရေခဲတောင်များကစားခြင်းနှင့်စောင့်ဆိုင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သင်တုန့်ပြန်မှုသည်ကြာရှည်မခံပါကကြာမြင့်စွာကြာမြင့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်, ကျွန်တော်တို့ကပထမ ဦး ဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မက်ဆေ့ခ်ျများအနေဖြင့်ကိုင်ထားခြင်းနှင့်ဖြိုဖျက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရပါလိမ့်မယ်။ မင်းကိုအားကိုးနေရတယ်
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်ဆံရေးတွင်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တစ်ခုခုအလေးထားပါကအရာရာတိုင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည်ကိုမေ့လျော့လေ့ရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်သင်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာသူငယ်ချင်းဖြစ်သော်လည်းသင့်ကို၎င်းနှင့်၎င်းကိုလေးစားမှုမရှိသောသူတစ် ဦး ထက်သင်ပိုထိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၌အခြားသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်များစွာရှိသည်၊ ဥပမာ၊ သင်နှင့်အချိန်ဖြုန်းရန် (သို့) သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိုရည်သောက်ရန်သူဖြစ်လာသူနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းထက် အရမ်းရှုပ်ထွေး သငျသညျအသေအဆုံးမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။
ဒါပေမယ့်သိသာတဲ့အချက်ကတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကသူတို့အပေါ်မှာခံစားချက်တွေစဖြစ်လာနိုင်တယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအစကတည်းကချမှတ်ခဲ့ရင်တောင်သင်ဟာတခြားအရာအားလုံးထက်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပေမယ့်ကံမကောင်းတာကတော့ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူး။ သင်၏ပြproblemsနာများရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အကွာအဝေးကိုလက်ခံခြင်းမရှိပါက၊ သင်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအခိုင်အမာစောင့်ဆိုင်းလျှင်၊ သူ / သူမနှင့်လိင်မဟုတ်သောအခိုက်အတန့်များကိုသင်မျှဝေလိုပါက၊ သူသည်သူ / သူမအားချစ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူမ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကောင်းသောဆွေးနွေးမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Angelina Jolie နှင့်အင်တာဗျူး - ဘီဘီစီအူဒူ - ဗီဒီယို
Dj Arafat: အမ် Tina, Carmen, Samuel Etoo နှင့်မိသားစုအားလုံးနံနက်ခင်း (ဂျီ Arafat ၏ Residence) - ဗီဒီယို